ABAKHWELI BEMONSTER HUNTER-ISIBHENGEZO ESISEMTHETHWENI SITYHILA ITRAILER KUNYE NOHLAZIYO OLUNTSHA AWUFUNI KUPHOSWA - IMIDLALO
Abadlala umdlalo kwihlabathi liphela abakhetha ii-RPGs banezizathu ezininzi zokuvuya. I-franchise yeMonster Hunter iyayibuyisa le nto
Abadlala umdlalo kwihlabathi liphela abakhetha ii-RPGs banezizathu ezininzi zokuvuya. Ilungelo lokungena kwiMonster Hunter iyabuya kulo nyaka ikhutshiwe. Uthotho lwezinto zokudlala ezisebenzayo zilawula kakhulu eJapan ixesha elide ngoku. I-franchise yokuqala yenza i-start yayo kwi-Play Station 2 ngo-2004.
Ukusukela ngoko, iye yaba lelinye lawona manqaku aphezulu emidlalo kuCapcome. Okwesibini kuphela kwindawo ethandwayo yoMhlali. Abahambi beMonster Hunter abazayo baya kuseta kumhlaba oyintsomi waseFelgia. Apho kangangeenkulungwane, abantu bebehlala kunye nezilo. Kodwa xa kusenziwa isiphithiphithi, ubumnyama buqala ukusasazeka emhlabeni.
Eyona midlalo ilungileyo kwi360
Abakhweli beMonster Hunter: Ikhupha nini?
Kukho ulwazi oluninzi oluphikisanayo malunga nokukhutshwa komdlalo ukuza kuthi ga ngoku. Itreyila yomdlalo, esanda kukhutshwa, ibhengeze umdlalo oza kuphuma kamva kulo nyaka. Kwangelo xesha, ivenkile yosetyenziso ikhankanya ukukhutshwa kuya kuba ngoFebruwari 29, 2020, akunangqondo. Kodwa yintoni evakalayo kukuba umdlalo uvulelwe ukubhaliswa kwangaphambili kwizixhobo ze-Android kunye ne-iOS.
Nangona kunjalo, ayizizo zonke ilizwe. Okwangoku, umdlalo uya kufumaneka kuphela eJapan. Akukho sibhengezo sokuba umdlalo uzakufumaneka kwihlabathi liphela. Kodwa kuthathelwa ingqalelo irekhodi le-franchise kunye nokuthandwa eNtshona, ngumcimbi wexesha kuphela. Ke akukho sizathu sokukhathazeka ngoku.
Abakhweli beMonster Hunter: Iya kuba njani i Gameplay?
I-RPG ayizukuphumelela isenzo. Ukuthatha indawo eFelgia, abadlali bezemidlalo baya kufumana umhlaba oqingqiweyo kunye neendawo ezikufutshane. Kuza kubakho iindlela ezininzi ezisecaleni kunye nomsebenzi wokugcina umdla wabadlali. Xa ungayenzi loo nto, yiba ngumgibe ekulweni okanye ekubambiseni izilo ezikhulu kunawe.
Umdlalo uthembisa ukuzisa amanyathelo amatsha kunye nezixhobo ezibulalayo. Ngasemva kwemihlaba emihle, abadlali bebhola kuya kufuneka bagqibe imisebenzi eyahlukeneyo ukuze bafumane umvuzo. Umntu unokusebenzisa le mivuzo yokuphucula izixhobo kunye nempilo. Inqaku labadlali abaninzi kuthotho luya kuqhubeka apha.
Abakhweli beMonster Hunter: Lithini eli bali?
Umhlaba oyintsomi waseFelgia yindawo entle yokuhlala. Abantu kunye nezilo bahlala apha ngoxolo, bencedana. Isizathu salolu lungiselelo yayiyimizamo ye-Ten Great Dragon Knights. La madoda awusindisile umhlaba kwintlekele enkulu kwaye angenisa ixesha elitsha loxolo.
Oko kubonile abantu bebetha ubudlelwane obunobuhlobo kunye nezilo. Kodwa emva kweenkulungwane, umanyano lwabo luyasongelwa. Njengamafu amnyama esiphithiphithi asondelayo, la maqela mabini kufuneka alwele ukhuseleko lomhlaba wabo kunye nekamva.
Abakhweli beMonster Hunter: Ngaba itreyila iphumile?
Itreyila yomdlalo uphume ngaloJanuwari nje. Ukuqala kokubonisa okwenziweyo kuye kwenza ukuba wonke umdlali weqonga abe nethemba lokudlala ngokuntywiliselwa.
I-franchise yeMonster Hunter ithandwa kakhulu ngabalandeli. Ngokuqaliswa komdlalo omtsha kwizixhobo eziphathwayo, ijolise ekubeni ifikeleleke ngakumbi kubalandeli. Ngelixa ilizwe lilinde ngolindelo, abaqulunqi baya kujonga ukubethelela ubugcisa babo kwakhona.
Ngaba kuya kubakho ixesha le-2 kaJulie kunye ne-phantoms
South park hulu iziqendu ezitsha
UJack ryan tv uthotho lwexesha lesi-3
Imiboniso bhanyabhanya yamanyathelo amakhulu
ixesha lesi-5 uhlobo olungqindilili
zingaphi iziqendu kwikakegurui